musha NYAYA DZEEEOPEAN Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yekambani yebhola iyo inonyatsozivikanwa neNickname; 'The Tank'. Yedu Romelu Lukaku Ubwana Nhau Nhoroondo ye Untold Biography Facts inokuudza zvizere zviitiko zvinokosha kubva paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake. Ngatitange.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu Hwokutanga Muhupenyu
Romelu Menama Lukaku akaberekwa musi we 13th yaMay, 1993 kuAntwerp muguta rekumusoro kweBelgium naMnu Roger Lukaku (Baba) uye Mai Adolphine Lukaku (Amai). Akaberekerwa muBelgium madzinza madzimai (Congo yakabva) iyo inoumba vashomanana vevanhu muBelgium.
Kuberekerwa mumhuri yebhora kwakabatsira zvikuru kufanana kwake nemutambo. Iwe Romelu hauna kumbobatanidzwa mumutambo semucheche sezvo vabereki vake vasina kumbobvira vade bhora richimuvhiringidza kubva mumabhuku ake. Kubatanidzwa kwake mubhoza kwakatanga semucheche paakaumba tsika yekucherechedza maminitsi ose e Premier League football nababa vake.
Maererano naLukaku; "Ndakatarisa iyo Premier League kubvira ini ndaiva nemakore mapfumbamwe. Mavhiki ega ega ndakatarisa mitambo, ndaiwanzoona Jimmy Floyd Hasselbaink vachikwikwidza zvikwata uye ndichiyeuka mumwe weManchester United, volley ku Old Trafford, uye ndakasarudza kuti ndaida kutsigira boka iri. Yakanga iri kuuya Didier Drogba uyo akandibata zvakadaro mukugara neboka ".
Bhora rake rinotarisa hobbie rakapedzisira raendeswa kune chinodhaka chemitambo yechina yevhidhiyo seStart PlayStation. Lukaku aiva mwana akangwara aigona kudzora kutamba kwake uye achiri kushanda kuchikoro.
Kugara uchifungisisa nekufunga nezvemitambo yevhidhiyo kunyange pawakabatikana nemamwe mabasa wakanyatsochengetedzwa nemukomana. Izvi zvakaita kuti mubereki wake avabvumire nguva yebhokisi yenguva yemwana wavo. Nenguva isipi mukoma wake muduku, Joridhani akatevera.
Sezvo achigamuchirwa kudya mubhoza, Romelu Lukaku akachinja pfungwa dzake pakucherechedza zvakakosha pamushambadziro panguva yekudzidzira masikati. Uchenjeri hwake hwakaonekwa senheyo yekubudirira iye nhasi.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Upenyu hweMhuri
Romelu Lukaku anouya kubva kumhuri duku yevashandi vanodhakwa uye vagoverani. Vose nhengo dzemhuri yake kusanganisira amai vake vanofema uye vanorarama bhora zuva nezuva.
The Biography of the Lukaku Family
Baba vaLakaku (Mukuru Roger Lukaku) aiva mutevedzeri wemutambo wemutambo uyo akapinda mumutambo webhola kunze kwehurombo uye chido chekuwana mararamiro akanaka.
Akatanga basa rake rebhora mune semunhu anogara kuBelgium panguva yekutanga ye 23. Yakanga iri nguva yakaoma kune ani zvake kuti atange kutanga kumutambo wakanaka. Roger aiva nerombo rakakwana kuti afanane nebhola panguva iyoyo pasinei nokuti haana kuenda kune imwe yevadzidzi vechidiki.
Ari pachikwata, akarova KV Oostende, KV Mechelen uye Germinal Ekeren.
Anofungidzirwa zvakanakisisa nokuda kwechinangwa chake chekudzidzira uye nekukurumidzira iyo mbira yakagadziriswa yakagadzirirwa kambani yake kuBelgian First Division mu1992.
Mutungamiri Roger Lukaku zvakare akatamba mutambo weZimbabwe National Soccer muChikwata cheHNCX FIFA World Cup. Kunyanya zvakadaro, akapinda muC1994 uye 1994 African Cup of Nations.
Kutanga kutanga bhora panguva yakwegura, Roger akapika kuti haazomboiti kuti vanakomana vake vatange nguva pfupi saiye. Izvi akaita kuti ave nechokwadi chokuti mwanakomana wake wokutanga, Romelu. Izvo zvazvakakwanisa kuita, zvakakodzera kutaura kuti Romelu Lukaku haasi wepedyo pedyo nababa vake zvakasiyana nemamu wake ane simba rakawanda kwaari. Iwe uchanzwisisa chikonzero apo iwe uchifamba pasi ichi chinyorwa.
Amai Lukaku (Adolphine) ibhizimisi rebhizimisi rebhizimisi rinotarisira zvisarudzo zvikuru mumabasa emwanakomana wake. Akashanda nenzira dzakawanda. Somuenzaniso, kusarudza kutungamirirwa kwemwanakomana wake. Anotaurira kuti ndiani anonyatsoratidza uye kana asingafaniri kuisa chibvumirano. Akanga ari uropi shure kwaReluelu Lukaku kuramba chibvumirano chake che Everton.
Vazhinji bhomba yebhola rinofanirwa kupfuura nepakati pavo kuti vauye kumwanakomana wavo, Romelu. Anokwanisa kukonzera negiotiation yakakundikana kunyange kana mashoko evanhu akawanikwa.
Semuenzaniso, Everton akamboita chibvumirano nemurwi weRomelu Lukaku, Mino Raiola, pamusoro pemakore mashanu matsva, £ 130,000-week-deal iyo iyo mumiririri wake akati "99.9 per cent" vamwe vaisayina, asi muBelgium mhirizhonga vakapiwa nguva yekuenda kumba panguva yeWithton kuenda ku Dubai uye akazove nokuchinja kwemwoyo nekuda kwemasimba ake emasimba makuru.
Everton anotenda Adolphine akashanda mubato reU Lukaku sezvo vaifanira kunge vakurukura kuda kwake kutamba muChampions League. Amai Aldophine Lukaku vakakodzwa nokuda kwesarudzo yemwanakomana wavo kuti vasayine Everton panzvimbo yekutanga.
Muduku Hama: Romelu Lukaku ane mukoma nezita Jordani. Jorodhani gore rakanyanya (akaberekwa musi wa 25t July, 1994) kupfuura mukoma wake mukuru Romelu. Ndiye mutambi wenhomba semukoma wake mukuru. Asi kunze kwebhola, Jordani ishamwari yakajeka yepa Twitter iyo inoti in quote, "Zvandinotya ndezvake".
Lukaku's Jounger Hama. Jordan Lukaku
Maererano nehukuru bro Romelu, "Joridhani yakagadziriswa kuva yakanakisisa: 'Zvechokwadi iye ari nani pane ini. Ndiye mucheki weboshwe uyo anonyatsoziva uye ane simba. '
hmmm .... Rumbidzo zvirokwazvo kubva kuBelgium guru; kunyange zvazvo tad yakaoma kusasarura kana iri mukoma wako muduku uyo ​​anobatanidzwa.
Romelu akamboshuvira kuti mukoma wake mudiki abatane naye kuWest London paakapedza kutamira kuChelsea mu2011. Mubvunzurudzo yake yekutanga mushure mekujoinha, Romelu akakumbira pachena kuti kirabhu yake nyowani atarise munun'una wake. Iyo kirabhu yakafunga kusabhadhara chikumbiro chakakomba nekuda kwekusaita zvakanaka kwekutanga izvo zvakakonzerwa nababa vake. (Yakatsanangurwa Pazasi).
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Akafirwa nababa vake
Romelu Lukaku akapedza nguva inokosha yenguva yake kuCentral kurwisana kuti asunungure baba vake Roger kubva mujeri reBelgium mushure mokunge atongerwa mwedzi ye15 mujeri yekurova mukadzi uye kumuchengetedza mumotokari yemotokari yake. Akashamisika nemutongo wekunge atadza kuenda kumugwagwa. Akataura kuti kunyange iwe iwe mukadzi uyu zvechokwadi aimbova baba vababa, anofanira kunge akagadzira chikamu chikuru che nyaya yake.
Lukaku Snr aifanira kupinda mukutongwa kwake, asi akashaya pasi pekuzvidzivirira kwaainge asina kuziviswa. Romelu Lukaku akaodzwa mwoyo nababa vake mushure mokunge vatongi veBelgium vakaona kuti akanga atamira kune rumwe rutivi rweBrussels kunyoresa kero idzva mune imwe kuti vatize dambudziko rake. Izvi zvakakonzera kutambudzwa nekukurumidza uye kutongerwa kujeri kwemwedzi ye15.
'Mutengi wangu akatongerwa mhosva nokuti haana kuonekwa mudare,' gweta rake akati. 'Haasi mujeri. Mukadzi wake ari kutambura, asi vanakomana vake, Romelu naJorodhani, vari kuita zvose kuti baba vavo vasunungurwe nokukurumidza sezvazvinogona. '
'VaMongor Roger Lukaku vari mutirongo vakavhiringidza kutonga. Izvi zvakaitwa kune vamwe kuti nyaya yacho iedze zvakare. Zvisinei, zvose zvakaitwa zvakakundikana. Akasunungurwa kubva mujeri mushure memwedzi ye15 yebasa rakaoma. Nguva yake yejeri yakanga iri nguva yakaoma kwaari sezvo izvi zvaiva nemigumisiro yakaipa pahutano hwake sezvinoratidzwa pamusoro apa. Akanga achifanirwa kuwana chirango chakawedzerwa kune mhosva yakawedzerwa yekuvhara dare nekudzoka. Romelu Lukaku akamira izvi kuti zvirege kuitika sezvo akawana gweta rakanakisisa kuna baba vake. Kuramba kwake kumhanya kuti awane baba vake akachengetedzeka uye kusunungurwa kwakakanganisa bhora rake basa maererano nekunonoka kwebasa kuCentral. Izvi, kunze kwekusavimbika kwababa vake zvinokonzera chikonzero nei vasisiri shamwari dzepamusoro.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Ukama Hupenyu
Panyaya yekunyora, mutambi akareba uye wakasimba mumuviri haasati akaroorwa asi haasi oga. Ane musikana anodikamwa nemazita Julia Vandenweghe. Vose vari mukudanana kwakadzama kune mumwe nemumwe.
Julia Vandenweghe naRomelu Lukaku havana kunyara kuratidza kudanana kwavo mumaziso evanhu vose.
Anomufarira kumativi ose anomutora. Vanga vachifambidzana kwemakore mashomanana uye vese vanoziva nezvazvo vanotenda kuti zvechokwadi ichaguma mumuchato.
Julia anonyatsonakidzwa nehukuru hwaReluelu, mukomana wake. Kunyaradzwa kwake maari kunogona kutsanangurwa muZ6 zvikonzero zvinoreva,
Chokutanga ndiGene yake. Romelu ndiye anogona kuroorana naye uye anogona kubereka vana vanogona.
Chechipiri kuchengeteka. Ane misumbu inoita kuti anzwe akachengeteka. Julia anoziva Romelu anogona kumudzivirira, zvisinei nokuti chii.
Chechitatu, Romelu ndiye anopa zvakanaka. Anomutarisira uye anopa zvose zvaanoda.
Chechina, Romelu mukomana wetsamba ane unhu hwakanaka. Nokuti Julia, ane mukomana akanaka anotarisa kumubatsira.
Kunze kwekuve akanaka uye akanaka, Romelu akafuma kwazvo uye hukama hwehupfumi. Sezvakangoitika, ndeipi zvimwe zvaangada kubva kwaari ?.
Vose vari vaviri vanopedza nguva dzavo dzakanakisisa dzakanamatira kunze kwezviitiko zvekunze. Pasina mubvunzo, Julia musikana akanaka, ane mavara anoshamisa uye chiso chisina chaipo uye ganda.
Akamboshanda seSeisure, Travel & Tourism Professional muBelgium, asati asvika mubasa revatengi kuCosta Crociere. Romelu Lukaku akaita kuti asunungure uye iye zvino akamuita mutengesi mune basa rake.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Maonero aaiita sezera re 10
Munhu wose achati ivo vaine ruvengo ivo havana kutamba naye
Kana iwe uchitamba bhora newawakaroorana naye pawakanga uri mwana, ipapo iwe uchayeuka mufaro wekuva nemumwe wemakore akafanana asi unoita zvikuru uye anotyisidzira. Izvi ndizvo zvakaonekwa naLakaku pazera re 10.
Akange ari mumwe munhu wose anotya nokuti iye nguva dzose ari mukomana mukuru mumunda wekutamba. Akaonekwa semumwe munhu aizoramba ari pachinzvimbo chekutsvaga uye achishungurudza chero munhu anorwisa anouya kuzoronga. Akaramba ane hukama hwakanaka kwazvo, nguva ino kune rumwe rutivi rwechechi (kurwisa).
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Career in Summary
Lukaku akabatana neboka rake rekuRupel Boom ava nemakore mashanu. Pashure pemakore mana paRupel Boom, Lukaku yakawanikwa nevatsva veLierse SK, yeBelgium Pro League team nechechi yakatanga vechikoro.
Akatamba Lierse kubva ku2004 kusvika ku2006, achicherechedza 121 zvinangwa mumitambo ye68. Mushure mekunge Lierse yakatorwa kubva kuBelgian Pro League, Anderlecht akatenga vashoma vaduku vechidiki veC13 kubva kuLierse mukatikatikati yeC2006, mumwe wavo aiva Lukaku. Akatamba mamwe makore matatu semutambo wechidiki naAnderlecht, achicherechedza 131 zvinangwa mumitambo ye93.
Lukaku akaita chikwata chake chekutanga paakanga achiri kuchikoro pazera remakore 16, uye akava 2009-10 muchengeti wepamusoro muBelgium uye Anderlecht akakunda mukwikwidzi weBelgium. Akakundawo Belgian Ebony Shoe mu2011. Mukati re 2011 rekutsvaga kwechando, Lukaku akabatana ne Premier League club Chelsea. Akange asingaonekwi nguva dzose mumwaka wake wekutanga ikoko, uye akapedza nguva dzinotevera mbiri dzechikwereti kuWest Bromwich Albion neAtton pamwe chete, achisayina zvachose zvekupedzisira kwekambani yekambani £ 28 mamiriyoni mu2014.
Lukaku akaita sarudzo yake yepamusoro yeBelgium ku2010, uye kubva ipapo akawana mari ye50. Akamirirawo nyika muZimbabwe Cup Cup 2014 uye UEFA Euro 2016.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Kukunda Ebony Shoe Award
The Ebony Shoe mubayiro i nhabvu mubairo muBelgium inopiwa gore negore kune zvakanakisisa African kana kuti African origin player mu Belgian Pro League. Dare rejeri rinoumbwa nevadzidzisi vemapato eague, the Tende romuBelgium mutungamiri, nhau dzevatori venhau, uye jongwe (s).
Sezva 2014, Mbark Boussoufa (3 wins), Daniel Amokachi (2 wins) uye Vincent Kompany (2 wins) ndivo chete vatambi vakakunda chikwata kupfuura kamwe chete.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Nzira yaakawira nayo kuda Chelsea
Izvi zvaive maererano naLukaku;
"Takanga tine chikoro uye tave nemazuva matatu tichienda kuLondon kuti tishanyire zvakawanda mumamyuziyamu. Ndakanga ndisingazivi kuti takanga tichishanyira Bhuti saka ndakashamiswa zvikuru. Ndakanga ndiri 16, uye ndakatotamba naAnderlecht. Yakanga iri kurota kwakazadzika kushanyira apo hero yangu (Didier Drogba) inotamba. Kubva pazuva iroro, handina kumborega kurota kutamba kweCentral FC. Ndakanga ndichirota kutamba pano kubva pandakanga ndiri nemakore 10, ndichifunga nezvekubatana nemaoko avo vose vakadai saJohn Terry naFrank Lampard uye hero yangu, Didier Drogba. Zvakashamisa kuona zviroto zvangu zvichiitika.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Kushanyira Chikoro Chekare
Romelu Lukaku iye zvino ane Baccalaureate (BSc) muhukama hwevanhu. Maererano naye "Kuenda nekuita zvakanaka payunivhesiti paine nebhola sezvo basa rako rokutanga rakandiomera zvikuru. Yakasvika pane imwe nguva pandakanga ndine 12 miedzo uye yaivawo mitambo muBelgian League panguva imwecheteyo. Kuva nemuongorori wangu pakati kwaiva kunzwa kwakashata. Pasinei nezvipingamupinyi, ndakafara kuti ndakazviita. Chimwe chinhu chandiri kufara kwazvo pamusoro pe ".
Romelu Lukaku anoita nguva yekushanyira Community Primary School kudzidzisa chizvarwa chinotevera chebhokisi chinofarira vana (Boys neVasikana) pamusoro pekuda kusambosiya padzidzo yavo vachidzingirira basa ravo rebhola. Akaita izvi achingoita zvake Kick It Out Mabasa emakurukota.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Mutevedzeri Wakaitwa naPastori David akakunda kutya kwake
Yaiva Pastor David Luis uyo akamunyengeterera munguva dzake dzakaoma neBenki FC.
Paanenge ari pasi, Romelu anoona David Luiz parutivi rwake kumunyaradza uye kumupa zano kuti arambe achikwira. Chiito ichocho chinotaura zvakawanda nezvekuti nei achimuremekedza kusvikira zuva.
Nhasi, zvinonzi minyengetero yake kuna Lukaku yakabhadhara. Kunze kwekunetseka kwechokwadi, kune simba muminyengetero. Kunyangwe Mwari akasarudza avo vaanoda kukomborera. Romelu Lukaku, Mwari akanga ari parutivi rwako.
Maererano naLukaku; "David Luiz akandikurudzira kuti dzimwe nguva ndinofanira kurasikirwa kuitira kuti ndiwane nguva yemberi! Akandiudza kuti nditore chisarudzo. Akandiudza kuti ndingada kubva kuBelenburg kune kambani duku. Kuti ndini ndoga chikonzero chekudzoka kukuru mubasa rangu. Ndakateerera zvose zvaakataura uye zvakaitika kuti "
Iyi mazano akauya apo Romelu Lukaku akanzwa akashungurudzika paakashaya chirango chekupedzisira chekupfura kunokosha kweCentral.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Kutamba PlayStation 4 paTrain
Romelu Lukaku neBelgium boka revarume vaKevin Mirallas havasi shamwari dzepedyo. Vanodhikwa zvakare kumutambo weVideo PlayStation. Vatambi vose vari kuda kutora zvose TV uye Playstation 4 pachitima kuzotamba pavanenge vachienda kumakwikwi.
Lukaku ndiye mutevedzeri wemutauro wemitauro yakawanda kwazvo. Mutungamiri wemakore anonzi 23 anotaura Dutch, French, Spanish, Portuguese, English uye anonzwisisa chiGerman.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Kutamba Basketball naPauro Pogba
Paul Pogba, uye Romelu Lukaku shamwari dzakanaka uye vakwegura. Vanoda kuratidzira kukodzera kwavo masikati fomu uye abs sezvo ivo kazhinji vakamboita basketball munguva dzezororo.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Kuwana Zvimwe Zvinangwa kupfuura ani zvake munyika
Lukaku akawana 125 vavariro mubasa rake. Panguva imwechete ye23, Ronaldo akanga atora 110, Luis Suarez 107, Wayne Rooney 100 naZlatan Ibrahimovic 65.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -Twitter Wierd Facts
Lukaku akatakura mukadzi wake kumba kubva kuchipatara mushure mokunge amuberekera.
Apo Lukaku anosimudzira, haazvikudzi, iye anotasva pasi pasi!
Apo Romelu Lukaku akasvika nokukurumidza kudzidziswa, Roberto Martinez akaranga vamwe vatambi vose kuti vauye nokukurumidza.
Mweya inogara pedyo nemoto wemusasa uye udza Romelu Lukaku nyaya.
Apo Alexander Bell akagadzira foni, akaita kuti 3 isashe difoni kubva kuna Romelu Lukaku.
Rima rinotya Lukaku.
Paul Scholes anogona kurova muti nemubhokisi kubva kumadhora e50, Lukaku angakunda Scholes nemuti kubva kumadhora e100 kure.
Vana vanonyeverwa kuti vasashamiswa nekasi. Miseve inonyeverwa kuti isashamwaridzana naLakuaku.
Romelu Lukaku Utano Nyaya Plus Untold Biography Facts -LifeBogger Biography Rankings
Lukaku anoda kuzivikanwa nekuda kwezvinangwa zvake, nzira yake, nekukurumidza uye nekupedzisa kupedza. Hezvino hezvino LifeBogger Rankings.
Belgian Football Diary
Marcus Rashford Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts